Dhirivhari Bhasiketi remavara tulips "Chitubu Kaleidoscope" muMoscow - Raira maruva
Bhasiketi yemhando dzakasiyana-siyana tulips "Chitubu Kaleidoscope"
Dhirivhari ~ 3h., mahara muMoscow
Basket nemaruva muorenji kubva kune exotic leucospermum 5 pcs, germini 10 pcs, rose Wow 10 pcs, chrysanthemum spray 5 pcs, bush rose 3 pcs, alstroemeria 6 pcs, salal pack, basket.
9750 ₽ Tswanda yemaruva "Orange denga"
Tsvuku tsvuku - 51 pcs. Bhokisi reheti - 1 pc.
7650 ₽ Umambo
Maruva ane mavara akajeka kubva pamaruva akasiyana siyana: gerbera sanganisa 12, chena alstroemeria 5, chena gwenzi chrysanthemum 3, pink chrysanthemum 3, diki chamomile 5, yepepuru lisianthus 5, solidago 6, salal 1 pack, wrinkled craft.
8250 ₽ Maruva emaruva "Hit yemwaka"
Bouquet yemakumi mashanu emavara tulips mune yekugadzira mapepa mapepa.
5740 ₽ Mhete yemhando dzakasiyana-siyana tulips (51 tulips)
Hombe saizi ngowani bhokisi rine 201 tulip musanganiswa.
25350 ₽ Hat bhokisi rine tulips (201 tulips)
Maruva emaruva (pichisi, tsvuku uye chena) makumi matatu nemapfumbamwe ane eucalyptus.
4100 ₽ Maruva emaruva "Roses mubindu"
Bouquet yeyero freesias 25 pcs. ine yekushongedza greenery salal, aspidistra 6 pcs. mukunzwa.
6120 ₽ Maruva emaruva "Yellow freesia"
Iyo bouquet yemakumi mashanu emaruva emupata ane yekushongedza greenery mupakeji. Iyo ruva remaruva emupata haringori rakanaka chete, asi zvakare rine hwema hunofadza kwazvo. Iwe unogona kuita kushamisika kunofadza zvakadaro kune chero munhu. Uye zvakare nekupa iyi bouquet munguva yechando kana kutanga kwechirimo, iwe unozonyanya kushamisika iye anogamuchira nechipo chakadai. Chikonzero chinogona zvakare kuve chero: Kurume 50, Kukadzi 8, Zuva reValentine, zuva rekuzvarwa, gore, rudo, kupotsa, kupora, zvakadaro.
21750 ₽ Maruva emaruva emupata "Hunhu hwakanaka"